जाडाे मौसममा घरलाई कसरी इन्सुलेट गर्ने?
2021-02-05 By GharSansar0Comments
सबैलाई न्यानो, आरामदायी घर मन पर्छ तर तपाई कसरी आफ्नो घरलाई न्यानो बनाउन सक्नुहुन्छ ग्यास र बिजुलीको लागि पैसा खर्च नगरी?
शुभ समाचार यो छ कि घरमा गर्मी नोक्सान रोक्न कम लागतको उर्जा संरक्षण उपायहरू छन्। तिनीहरू मध्ये धेरै छिटो र सजिलो समाधानहरू हुन्। ऊर्जा दक्षता - विशेष गरी इन्सुलेशन मार्फत - उर्जा बचत गर्ने र घरमा आराम गर्ने सुधार गर्ने एक तरीका हो तपाईंको ऊर्जा बिल काट्ने बेलामा (तपाईले यति कति बचत गर्न सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्)।
इन्सुलेशनले जाडोको समयमा तातो राख्नमा मद्दत गर्दछ र गर्मीमा तापलाई बाहिर राख्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो घरहरू इन्सुलेट गरेर हामी कम ईन्धन पनि जलाउँछौं, जुन वातावरणको लागि उत्तम छ। मौसम परिवर्तनलाई रोक्न र यस ग्रहको रक्षा गर्नको लागि उर्जाको माग घटाउने एक उत्तम गतिविधि हो।
घर सन्तुष्टि सर्वेक्षण मा, चिसो, तातो गर्न गाह्रो कठिनाई कोठा उठाइन्छ सर्वेक्षण बीचमा मान्छेहरु मध्ये एक सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक मुद्दाहरु को रूप मा उठेको छ कि माउन्ट इन्सुलेशन र अन्य ऊर्जा बचत उपायहरु को बारे उपयोगी जानकारी को लागी पढ्नुहोस्। अझ बढी र विचारहरूको लागि छत, भित्ता र भुइँ इन्सुलेशनको बारेमा हाम्रो लेख पनि जाँच गर्नुहोस्।
कसरी इन्सुलेशनले तपाइँलाई जाडो मा न्यानो रहन र गर्मीमा कूल रहन मद्दत गर्दछ?
तपाईंको घर जति धेरै इन्सुलेशन हुन्छ, यो तातो हुने गर्मीमा यो चिसो र कूलर रहन्छ जुन गर्मीको सूर्यमा रहनेछ।
तातो - जाडो मौसम सुरु हुनुभन्दा पहिले इन्सुलेशन कार्य गर्नको लागि वर्षको उत्तम समय गर्मीमा हो। ग्लोबल वार्मिंगको कारण रेकर्ड ब्रेकि तापमान प्रत्येक वर्ष पुगेको कारण,  सुखमय जीवनयापन कायम राख्न यो बृद्धि भैरहेको आकर्षक तरीका हो। इन्सुलेशन महँगो, पावर-भोकाइ एयर कंडीशनिंग एकाइहरूको तुलनामा कम लागत हो त्यसैले तपाईं एक वर्ष भर एक एयर तंग घर को लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
घरमा आधा गर्मी घरको छत, भित्ताहरू, विन्डोज र भुइँबाट भाग्न सकिन्छ यदि भवन ईन्सुलेट गरिएको छैन भने। इन्सुलेशन भनेको तपाईंको घर वरिपरि ठूलो कम्बल राख्नु बराबर हो; भित्ताहरू, छत, फ्लोर, विन्डोज र ढोका जसले तपाईंको इच्छित तहमा तापक्रम कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको ऊर्जा बिलमा हजारौं रुपैयाँहरू कसरी बचत गर्ने?
ऊर्जा बिलहरू घटाउने व्यावहारिक सल्लाहहरू इन्सुलेशनले ऊर्जा संरक्षणमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्दछ र यी सरल उपायहरूले सबैभन्दा ठूलो वित्तीय बचत गर्न सक्दछन्:
फायरप्लेस भनेको ईंटा, ढुङ्गा वा धातुबाट बनेको एउटा संरचना हो जुन आगो थाम्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। फायरप्लेसहरू सिर्जना आरामदायक एम्बियन्सको लागि र कोठा तताउनुको प्रयोग गरिन्छ। आधुनिक फायरप्लेसहरू डिजाइनको आधारमा तातो दक्षतामा भिन्न हुन्छन्।
पुरानो दिनहरूमा हजुरबुबा र हजुरआमाहरुले क्ले स्ट्रक्चर स्टोभमा खाना पकाउँनुहुन्थ्यो जुन एक इन्सुलेट को रूपमा मान्न सकिन्छ ।
थर्मोस्टेट्स र स्मार्ट थर्मोस्टेट्स जबकि थर्मामिटरले हामीलाई कोठामा तापक्रम दिन्छ, थर्मोस्टेट्सले कोठामा तापक्रम सेट गर्दछ। थर्मोस्टेट्स एक अधिक कुशल र सजिलो तरीका हो हिउँदमा तपाईंको घरको तापक्रम नियन्त्रण गर्न; घरलाई तल शान्त पार्न विन्डोज खोल्नाले ईन्धनको अपव्यय हुन्छ र परिणामस्वरूप उच्च उर्जा बिलहरू हुन्छन्।
घर सजावट; थर्मल पर्दा र पट्टि प्रयोग गरेर
कुनै पनि कोठाको मर्मत र सज्जा गर्दा विन्डो ड्रेसिंग घरको सजावट डिजाइनको एक मानक अंश हो। कोठामा तातो राख्नको निम्ति मोटो, थर्मल पर्दा वा काठका शटरहरू प्रयोग गर्नु अर्को उत्कृष्ट तरिका हो। तिनीहरू आधुनिक र समकालीन डिजाइनहरूमा व्यापक रूपमा उपलब्ध छन्। त्यस्तै, फ्लोर इन्सुलेशन सुधार गर्ने एउटा सजिलो तरीका भनेको उत्कृष्ट थर्मल गुणहरू भएको अन्डरलेमा कार्पेटहरू फिट गर्नु हो।
तातो र चिसोबाट जोगाउन उत्तम तरिका भनेको भित्ता राम्रोसँग इन्सुलेट गर्नु हो। नेपालमा प्रयोग हुने साधारण तरिकाहरू ईट्टा र ब्लक हुन्।
ब्लाकहरू होमबाट राम्रो इन्सुलेटर होइनन् जुन तपाईंलाई गाह्रो समयमा निम्त्याउँदछ जब कि मौसम परिवर्तन हुँदा।
सबै तरिकाहरूले बजारमा उपलब्ध उत्तम ईंटहरू प्रयोग गर्दछन्। अहिलेको लागि उत्तम इन्सुलेटर एसीसी ईट्टाहरू हुन्।
पानी चुहावट जाँच गर्नुहोस्।
पानी चुहावट प्रत्येक घर मालिकहरूको लागि सबैभन्दा कष्टकर हुन्छ।
चुहावट हुनु अघि ठीक गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
नेपालमा हामी भुइँबाट चिसो हुनबाट जोगिन काठको भुइँहरू रुचाउँछौं। हामी मध्ये धेरैले चिसोबाट बच्नको लागि कार्परेट प्रयोग गर्न रुचाउछै। एक नयाँ तरीका छ जुन अझै नेपालमा प्रयोग गरिएको छैन। रेजिन फ्लोरिंग भनिन्छ जुन उत्तम हो र लागत बचत गर्ने विधिहरू जुन पश्चिमी मानिसहरूले अहिले प्रयोग गरिरहेका छन्।